महाभारतको यो कथा, जो धेरै कम व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ !
काठमाडौं- अपमान, न्याय–अन्याय, बदला तथा विध्वङ्स लगायत केही यस्ता शब्द हाम्रो दिमागमा आउँछन्, जब हामी ‘महाभारत’ नाम सुन्छौं ।
महाभारतका हरेक चरित्रका आ–आफ्नै कथा छन् । हरेक भूमिकाको व्यक्तित्व उनीहरुको परिस्थिति, पुर्नजन्म आदि तत्वबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । ति भूमिकासँग तपाई आफूलाई जोडेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यसको अतिरिक्त महाभारत प्रतिज्ञाहरुका लागि पनि चिचिन्छ । युद्धका अतिरिक्त महाभारतमा यस्ता कैयौं कथाहरु छन्, जसबारे धेरै कम व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी छ ।
जस्तै, कौरव र पाण्डवहरुको युद्ध, पाण्डवहरुको स्वर्ग गमन, श्रीकृष्णको मृत्युसँग जोडिएका कैयौं कथाहरु तपाईले पढ्नुभएको होला । तर के तपाईले महाभारतमा कुन्ती, गांधारी र धृतराष्ट्रको मृत्युसँग जोडिएको कुनै कथा पढ्नुभएको छ ? महाभारतको एक कथाबाट थाहा हुन्छ कि गांधारी, कुन्ती र धृतराष्ट्रले अग्नि समाधी लिएका थिए ।
महाभारत ग्रन्थमा उल्लेख गरिएअनुसार कौरव र पाण्डवहरुको युद्ध पछि धृतराष्ट्र र गांधारी पाण्डवहरुसँग १५ वर्षसम्म रहे । त्यसपछि कुन्ती, विदुर र संजयसँगै वनमा तपस्या गर्न गए ।
एकदिन जब उनीहरु गंगा स्नान गरेर आश्रमतर्फ आइरहका थिए, त्यतिबेला वनमा भयंकर आगलागी भयो । शारीरिक रुपमा दर्वल भएका कारण धृतराष्ट्र, गांधारी र कुन्ती भाग्न असमर्थ थिए ।
यसकारण उनीहरुले त्यही अग्निमा प्राण त्याग्ने बिचार गरे । त्यपछि एकाग्र भएर वनको बीच भागमै बसे ।
धृतराष्ट्र, गांधारी र कुन्तीले प्राण त्याग्नु अगाडि नै पाण्डवहरु स्वर्ग गइसकेका थिए भने भगवान श्रीकृष्ण पनि बैकुण्ठ धाममा गइसकेका थिए ।
यस्तो मान्यता छ कि धृतराष्ट्र, गांधारी र कुन्तीको मृत्यु पछि नै कलियुग प्रारम्भ भएको हो ।
असार २४, २०७६ मा प्रकाशित
सुत्ने पोजिसन कस्तो छ ? सुताइबाट थाहा हुन्छ जीवनका धेरै कुरा
कान्छी औंलाले खोल्छ व्यक्तित्वको रहस्य
हिन्दू धर्ममा यसकारण विधवाहरू सेतो कपडालगाउँछन्
पत्नीसँग आलिंगन गर्नासाथ भएको थियो राजा पाण्डुको मृत्यु
सबैभन्दा अलग हुन्छन् यस्तो राशि भएका व्यक्ति
सूचनाको हकको प्रयोगले खोजी पत्रकारितामा ल्याएको क्रान्ति ! पूरा पढ्नुहोस
जाममा रिसाउने बानी छ ? ‘हर्ट अट्याक’ होला डा. ओम मुर्ति अनिल उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, अत्यधिक मदिराको सेवन, धुम्रपान, मानसिक तनाव, कोलेस्ट्रोल, शारीरिक निष्कृयता लगायतका थुप्रै कारणले मुटु रोग लाग्न सक्छ । यी सामान्य...
यसरी कहिल्यै नसुत्नुस्, हानी पुग्छ
यस्ता राशिवालासँग सम्बन्ध राख्नुहोस्, चम्किनेछ भाग्य
सौरभ गांगुलीले लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी
श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता